China HGM uchungechunge isebenze vibration yamalahle feeder Ukwakha futhi Factory | Izinsiza kusebenza zeChengxin Vibration
Umzimba omkhulu wesiphakeli samalahle wokudlidliza osetshenzisiwe uvaliwe futhi uxhunywe nokuvulwa okuphansi kwesilo. Uhlobo lwe-arch noma ipuleti lokukhipha imodeli emshinini lixhumana ngqo nezinto ezisemgqonyeni oyindilinga.
Umzimba omkhulu wesiphakeli samalahle wokudlidliza osetshenzisiwe uvaliwe futhi uxhunywe nokuvulwa okuphansi kwesilo. Uhlobo lwe-arch noma ipuleti lokukhipha imodeli emshinini lixhumana ngqo nezinto ezisemgqonyeni oyindilinga. Ukudlidlizela kwepuleti lokukhipha kudluliswa kahle ezintweni ezigcinwe esilo. Amandla wokudlidliza akhiqizwa amandla okudlidliza enza izinto zivuleke futhi ziwe. Okuqukethwe kudluliselwa endaweni ephansi yamalahle ngokusebenzisa ama-curve grooves ezinhlangothini zombili zesondli samalahle. Ukudlidliza kwe-feeder yamalahle kanye ne-curve groove eyenzelwe ngokukhethekile futhi yabalwa yenza okokusebenza ngosizo lwejika lokujikijela amandla ukuze kuqinisekiswe ukukhishwa kwamalahle ngokushesha nangokukhululekile kwento leyo, ngisho namalahle ane-viscosity ephezulu nokuqukethwe umswakama omkhulu. Kunezinhlobo ezimbili zokwakhiwa komshini: eyodwa ukukhishwa okuqondile kwe-hydraulic ehambayo i-flap yamahhala, kanti enye uhlobo lokukhiya okuzenzakalelayo. Owokuqala ungasetshenziswa ekusebenzeni kwezinto ezinomswakama wokubopha umswakama nenani elikhulu lokudla. Uhlobo lokukhiya oluzenzakalelayo lunokwakheka okuqinile kokukhethwa kobuso obugobile nobukhulu bezinhlayiyana ezibonakalayo: 200-1000MM curvature radius, kanye nebanga elincane eliphakathi kwendawo egobile ebusweni kanye neplanethi yokuphambukisa engu-150-80 Lapho imoto iyeka ukudlidliza, okubhalwe emgqonyeni izokhiya ngokuzenzakalela futhi iyeke ukushibilika, futhi asikho isidingo sokusetha isango.
Ukudlidliza okwesabekayo yisimiso esesabekayo. Umshini wenziwa yimoto yokudlidliza, umkhombe, ifanele nokunye. Yamukela isisindo esiphindwe kabili eduze kwesimiso se-resonance, isebenzisa intwasahlobo yenjoloba ukugunda amandla, isebenza kahle, inika amandla afanayo futhi awukho umsindo, futhi ijabulise amandla okudlidliza ukushayela umzimba omkhulu we-groove ukuthola i-amplitude edingekayo yomugqa. Ifakwe imvamisa isiguquli futhi ipayipi le-hydraulic elingaguquguqukayo, okukhipha amalahle kungancishiswa kusuka kubuncane kuye kokungu-120% wokukhiphayo, ukuze kufezekiswe umthethonqubo wejubane onganyakazi wokuphakelwa.
Isici esikhulu kulo mshini ukuthi ungondla ngqo lapho kungekho kunyakaza okunamandla, futhi amandla okuphatha angakhuphuka ngaphezu kuka-20% lapho kudlidliza. Ngaphezu kwalokho, lapho itheku lokukhishwa lifakwa enkabeni yebhande, ibhande alikho lula ukuphambuka, akukho uthuli, akukho ukumelana nokusakazeka nomthelela. Indlu yamalahle akulula ukuyivimba nokuyifaka. Kuphephile, konga ugesi, kusebenza kahle, kunokuphakelwa okukhulu kwamalahle, ukungcola okuphansi nempilo ende yokusebenza. Inomshini wokufafaza nowokuqeda amanzi emzimbeni. Lapho okuqukethwe komswakama kukhulu, amanzi asendabeni angakhishwa. Lapho okokusebenza kumile, idivayisi yesifutho ingasetshenziselwa ukufafaza into emanzi, enothuli oluhle nomphumela wokuqinisekisa uthuli, ongowemishini yokuvikela imvelo.
Isilinganiso sokuphakelwa kwamalahle t / h
Langaphambilini Isiphakeli sokudlidliza kagesi
Olandelayo: K uchungechunge olubuyisela emuva okuphakelayo kwamalahle
I-Chain Belt Coal feeder
Isiphakeli Samalahle Esidlidliza Ngezimayini
Impeller Yamalahle Element
K Uhlobo Element Element
Ukuphindisela Okuphakelayo Kwamalahle
Ukulinganisa Isondli Samalahle